Global Voices teny Malagasy » Fitsidihana ny bilaogy Libyana: Maty ve ny teny Arabo? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Aogositra 2018 13:00 GMT 1	 · Mpanoratra Fozia Mohamed Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libia, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Fiteny, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
Matetika ny bilaogera Libyana miresaka lohahevitra samihafa sy isan-karazany – na resadresaka tsotra izany na tsia. Niteraka adihevitra momba ny antsoina hoe “fahafatesan'ny” teny Arabo ny lahatsoratra iray vao haingana lazaina fa tsotra navoakan'i Lebeeya izay nanoritsoritany ny fomba nitiavan'ireo mpiara-miasa taminy ny mofomamy sôkôlà nataony  sy niarahaba azy tamin'ny alàlan'ny fikasihana hazo mba hialana amin'ny ‘maso ratsy’.
Nanomboka izany rehetra izany raha niteny i Lebeeya hoe: “LAZAO HOE” Mashallah” ry vahoaka …. ATSAHARO ny milaza hoe” KASIHO NY HAZO”, fa ataovy hoe mashallah.” (Ny fehezanteny arabo ma sha`a allah dia manondro ny fankatoavana izay nobinaikon'Andriamanitra eo amin'ny vintana tsara na ratsy izay mety hihatra amin'ny mpino). Maneho hevitra  ilay bilaogera Suliman hoe:
“Heveriko fa nampiasa ny “Dony ny hazo” ny mpiara-miasa aminao fa tsy “Mashallah” noho ny fanjakan'ny kolontsaina pop Amerikana manerana izao tontolo izao, anisan'izany ny firenena Silamo toa an'i Oman, Arabia Saodita, Libya, sns. Ny fijeriko dia tsy mahita izay ilainy amin'ny fiteny maty Arabo, Berbera na Swahili ny tanora tahaka anao. Miorim-paka amin'ny kolontsaina tsy manandratra ny maha-izy azy ny tsirairay sy ny fanehoan-tena ireo teny ireo, ka vokatr'izany, tsy dia mahagaga raha miteny Anglisy malalaka ireo tanora bilaogera, na dia any amin'ny firenena Arabo aza. Mety kokoa izany ho azy ireo, tahaka izay eto ho anao”
Mani kosa nandray ny fanapahan-kevitra hamolavola bebe kokoa ao amin'ny bilaoginy manokana  ary hiaro ny “fiainana” amin'ny teny Arabo sy teny hafa.
“Ny safidy malalaka dia izay rehetra momba ny fahalalahan'ny olona tsirairay hisafidy.. rehefa afaka, ny tianay lazaina dia mampiasa ny lohany ilay olona hieritreretana, handinihana, hihevitra ny lalany amin'ny fiainany sy hisafidy ny zotra arahiny araka izany..”
Nanjary velombelona kokoa indray ny takelaka fanehoan-kevitra.
Nihodina ny baolina ary nalaina tao amin'ny bilaogin'i Ghazi Imtidad .
“Vao haingana aho no nanomana fikarohana momba ny bilaogy Libyana ato amin'ny aterineto. Hatramin'izao aho dia nahavita nanisa blaogy 76 izay nosoratana Libyana ao anatiny na ivelan'i Libya, na mpila ravinahitra monina ao Libya ary manoratra momba izany, iray tamin'ireo vokatra fototra ny fahitana fa mampiasa ny teny Anglisy ihany na miaraka amin'ny tenim-paritra Arabo na Libyana ho toy ny fiteny voalohany hanoratana ny blaogin'izy ireo ny ankamaroan'ny bilaogy. Bilaogy 55 no manoratra amin'ny teny Anglisy fotsiny, ary bilaogy 11 mampiasa teny Anglisy sy Arabo, ary bilaogy 10 ihany no mampiasa teny Arabo fotsiny.
Ny fanontaniako ho an'ireo bilaogera dia:
Raha ny hevitrao, nahoana ianao no mampiasa ny teny anglisy na Arabo fotsiny?
Ary nahoana no mampiasa fiteny anglisy ny ankamaroan'ny bilaogy Libiana? “
Nanjary tena nafana sy masiaka ny adihevitra avy amin'ireo mpanenjika izay nanaporofo fa fitenin'ny mpampihorohoro ny teny Arabo sy ireo hafa manamafy fa ity fiteny ity no avy amin'ny Korany. Raha manana herim-po ianao, dia manoro hevitra anao aho mba hitety ireo fanehoan-kevitra rehetra, satria mahatonga vakinteny mahaliana azo antoka mba hahatonga anao hieritreritra lalina kokoa momba ny fiteninao izany.
Inona ary no fehin-kevitra? Nahomby tamin'ny famonoana ny teny Arabo ve ny fanatontoloana? Mitovy dika amin'ny fahafahana ve ny fitenin'ny mpampihorohoro mifanohitra amin'ny teny anglisy?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/24/125081/
 nanoritsoritany ny : http://lebeeya.blogspot.com/2007/05/work-sucks-ill-be-back-soon.html
 ma sha`a allah : http://www.answers.com/Mashallah
 Maneho hevitra: http://lebeeya.blogspot.com/2007/05/work-sucks-ill-be-back-soon.html#c5755855216472637564
 hamolavola bebe kokoa ao amin'ny bilaoginy manokana: http://sandsoflibya.blogspot.com/2007/05/answering-sully-formerly-suliman-on.html
 Imtidad : http://imtidad.blogspot.com/